DEG DEG-Wasiir Goodax Barre oo looga yeeray barlamaanka si wax looga waydiiyo arrimaha ardayda..
October 18, 2020 Xuseen 2
Guddi xaqiiqo raadin ah oo ka tirsan golaha shacabka ayaa ka dalbaday wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullahi Goodax Barre inuu hor yimaado golaha si wax looga weydiiyo imtixaankii shahaadiga ahaa ee sanadkan wasaaraddiisu qaaday iyo arrimo kale.
Ku-simaha wasiirka waxbarashada iyo ku-xigeenkiisa ayaa qoraal ka soo baxay guddiga waxaa wasiir Goodax loogaga dalbaday inay maalinimada Arbacada ah ee soo socota horyimaadaan.
“Anigoo fulinaaya amarka guddoomiyaha golaha shacabka, waxaana si xushmad iyo qadarin leh kaaga codsanaynaa inaad noogu timaadiin xarunta Villa Hargeysa ee golaha shacabka, si aan wax kaaga weydiino natiijadii imtixaanka dugsiyada sare ee dalka,” ayaa lagu yiri qoraalka,
Docda kalena qoraalka guddiga ayaa waxaa sheegay “Waxaan idinka rajeynaa inaad timaadaan xarunta Villa Hargeysa ee golaha shacabka maalinta Arbacada ee taariikhdu tahay 21-10-2020-ka.”
Wasiirka waxbarashada ha la weydiiyo in wasaaradda ay heyso warqadahii ardayda imtixaanada at ku galeyn.
Waxaan maqley in warqadahaas la gubey si loo lunsado lacag yar gunno aheed oo loogu talagaley sixitaanka imtixaanka.
Qofkasta oo wax garad ah waxuu ogyahay Abdullahi Godax Barre in uu yahay shaqsi aad uxun,Mida kale waxa wax lala yabo ah qof Nocaas ah in lo dhibo Xil Qaran oo walib ah Xil halbawle ah,dhibatada uu ugesystey dhalinyarada somaliyed,waxa wax laga xumado ah masulinta Qaranka somaliyed oo uga rali ah gadob falka xun oo ninkasi ugeystay Ardayda somaliyed,waxa hubanti ah in aay kuligod yihin Danbilayal calami ah.